Yenza ukuthi izivakashi zihlale ngokunethezeka ebese zisho okuhle kakhulu ngawe emva kokuhamba
Okushiwo yizivakashi ngawe
Imininingwane yendlu enembayo
Yini ilindeleke kubabungazi?
Sifuna ukukunikeza umhlahlandlela ocacile ukuze wazi ukuthi yini elindelekile ukuze uthole amaphuzu ezinkanyezi ama-5 njalo nje uma uhlalisa isivakashi.
Siyacela bonke ababungazi ukuba bahlangabezane nezidingo ezine eziyisisekelo: isilinganiso sesisonke, izinga lokuphendula, ukukhansela nokwamukela ukubhukha. Ngaphandle kwezinto eziyisisekelo, izivakashi zizosho okuthile ngawe emva kokuhlala nawe.
Usuvele ungumbungazi? Hlola Inqubekelaphambili yakho ukuze ubone ukuthi kuhamba kanjani.
Ukuze izivakashi zihlale kahle ngokunethezeka, wonke amakhaya kanye nababungazi kumele bahlangabezane nezimfuno ezine eziyisisekelo.
Ukuphendula masinyane lapho izivakashi zifika kubonisa ukuthi ungumbungazi oqaphele nocabangela izivakashi. Ukuphendula kwakho ngokushesha mayelana nezicelo zokubhukha nemibuzo emayelana nokubhukha kukalwa ngobude besikhathi osithathayo sokuphendula. Siyaye sicele ababungazi ukuthi baphendule kulezi zinhlobo zemilayezo engakapheli amahora angu-24.
Yamukela izicelo zokubhukha?
Azikho izivakashi ezithanda ukuthumela izicelo ezi-4 noma ezi-5 ngenhloso yokuthola indawo, ngakho-ke silindele ukuthi wamukele iningi lezicelo uma ikhalenda yakho ikhombisa ukuthi ivulekile. Qinisekisa ukuthi lezo zinsuku ezibonakala zivulekile ekhalendeni yendlu yakho uyakwazi ukubungaza ngazo. Ngale ndlela unamathuba amaningi okuthola izicelo zokubhukha okwaziyo ukuzemuka. Uyakwazi ukusebenzisa amasethingi akho okukhombisa ukutholakala kwendlu yakho ngenhloso yokuthatha ikhefu phakathi kwamabhukhingi, noma ngenhloso yokuvimbela ukubhukha isikhathi phakathi kokubhukha, noma ukuvimbela izicelo zokubhukha ukuze ungene ngalo lolo suku noma ngenhloso yokuvimbela ukubhukhwa kwezinsuku ezikude kakhulu.
Gwema ukukhansela izivakashi
Ukukhansela sikuthatha njengento ebucayi futhi siyaye sicele ukuba ababungazi bakugweme ukukhansela izivakashi–njengoba kungase kuphazamise uhambo lwazo! Uzohlawuliswa, okubandakanya ukuhlawuliswa ngemali, uma ukhansela ukubhukha okuqinisekisiwe. Sicela ukuthi ugweme ukukhansela ukubhukha okuqinisekisiwe ngaphandle uma kuba khona izimo ezingalindelekile.
Yenza ukuthi kushiwo okuhle ngawe
Izivakashi zisuke zilindele izinga elilinganayo ngekhwalithi, kungakhathaleki ukuthi zibhukha kuphi. Emva kwalokho nalokho kuhlala endaweni, izivakashi zizosho okuthile ngawe mayelana nalokho ezihlangabezane nakho ngesikhathi zihleli endaweni yakho, okungenye yezindlela esizisebenzisayo zokuhlola ababungazi. Amaphuzu akho esewonke asuke esehlanganise inani lawo wonke amaphuzu owanikezwe yizo zonke izivakashi ozibungazile.
Njengombungazi, uzoba nethuba lokunikeza izivakashi amaphuzu–mayelana nenhlanzeko yabo, isihe kanye nendlela abaxhumane nawe ngayo. Impendulo yakho isisiza ukuthi siqiniseke ukuthi izivakashi ziphatha amakhaya ezihlala kuwo njengamakhaya azo. Izivakashi okuvame ukuthi ababungazi bangasho izinto ezilungile ngazo kungenzeka zihlawuliswe.
Okuhle okushiwo yizivakashi ngawe
Sithole ukuthi ababungazi okukhlulunywa kahle kakhulu ngabo bagxila kakhulu ezintweni ezinhlanu: ukuhlanzeka, amasevisi abalulekile, imininingwane enembayo mayelana nendlu, ukungena kwezivakashi okuhamba kahle ngaphandle kokuphazamiseka kanye nokuxhumana okulawulekile.
Izivakashi zizolindela indawo ehlanzekile necocekile eziyibona ezithombeni zendlu yakho esohlwini. Qinisekisa ukuthi uzinike isikhathi esanele sokuhlanza phakathi kwesikhathi sokuhamba kwesivakashi nesikhathi sokufika kwesinye isivakashi uma ukuphuma kwesinye isivakashi nokungena kwesinye kulandelana eduze.
Izivakashi ziyoba nethuba lokunikeza indawo yakho amaphuzu, bese lawo maphuzu ezikunikeze wona akhonjiswe ekhasini lendlu yakho. Uma njalo uthola amaphuzu aphansi mayelana nenhlanzeko, kungenzeka ukuthi uhlawuliswe.
Hlanza lelo nalelo gumbi elizosetshenziswa yizivakashi, ikakhulukazi amagumbi okulala, amagumbi okugezela, kanye nekhishi
Hlola ukuthi ingabe azikho yini izinwele, izintuli, noma isikhunta phansi nasezindongeni
Hlola inzuzo oyenzile phakathi kokuhlala ngakunye:
Hlinzeka izivakashi ngokokwendlala umbhede/amashidi namathawula okuhlanzekile
Qoqa udodi, ukudla kanye nokudla okusele okushiywe yizivakashi esezihambile
Yenza ukuthi amabhukhingi akho angalandelani eduze kakhulu ukuze ube nesikhathi esiningi sokuzilungiselela phakathi kwesikhathi sokuphuma nokungena kwezivakashi. Uyakwazi ukuhlela kabusha izinsuku ezivuleleke ukubhukha ngendlela oyithandayo njengokuvimba usuku noma izinsuku ezimbili zingabhukhwa ngaphambi kosuku olungabhukhwa.
Khokhisa imali yokuhlanza ebese leyo mali uyisebenzisela ukukhokhela abantu abahlanzayo noma uqashe ngayo ungoti wezokuhlanza
Shiya okokuhlanza endaweni yakho ukuze izivakashi zikwazi ukukusebenzisa uma kwenzeka kuchitheka okuthile ngengozi noma kungcoliseka okuthile ngengozi
Sincoma ukuthi bonke ababungazi bahlinzeke ngamasevisi abalulekile ukuze izivakashi zibe nezinto ezizidingayo okuzokwenza ukuthi zinethezeke ziphumule kamnandi ubusuku bonke.
Okungenani isivakashi ngasinye esibhukhile masihlinzekwe ithawula elilodwa
Okungenani umqamelo owodwa ngesivakashi ngasinye esibhukhile
Ukuhlela kahle lokho okulindelekile ngaphambi kohambo kungenza ukuthi izinto zinihambele kahle wena nezivakashi zakho. Ukunikeza izivakashi ulwazi olucacile kanye nokumele zazi ngalo kabanzi njengokuthi nje ingabe zivunyelwe yini izilwanyana ezifuywayo ukuze izivakashi zikwazi ukuthatha isinqumo mayelana nokuzohlala endaweni yakho. Indlu echazwe kabanzi nangokucacile kanye nephrofayili kuheha izivakashi ezifuna indawo ezingahlala kuyo njengeyakho.
Izivakashi ziyoba nethuba lokukala ukunemba kolwazi olunikezayo.
Ikheli kumele kube elinembayo (nakuba ikheli lizonikezwa kuphela isivakashi esesibhukhile)
Imininingwane mayelana nobungasese begumbi lokulala nelokugezela kumele ibe ngenembile
Izithombe zendlu zikhombisa kangcono isimo kanye nokuhleleka kwendawo yakho
Amasevisi anjengoba ekhangisiwe, akhona futhi ayasebenza
Sebenzisa izithombe ezihlukahlukene zekhwalithi ephezulu ephezulu ezinezihloko bese ubhala incazelo egcwele yaleyo ndawo
Nikeza Imithetho Yendlu ebhekelele izimo ezibalulekile mayelana nezivakashi zakho. Imithetho yakho ingakubeka ngokucacile lokho okumele kwenziwe nalokho okungamele ukuba kwenziwe, njengezinto ezifana nokubhema, izilwanyana ezifuywayo, noma izikavashi ezifakwa kamuva sekubhukhiwe.
Yazisa izivakashi mayelana nalezo zindawo okungamele ukuba zibe kuzo ekhaya lakho, njengegaraji noma ethala
Kumele uthembeke mayelana nezimo ebezingalindelekile ezizoba nomthelela ekuhlaleni kwezivakashi zakho. Izivakashi zakho kumele zazi mayelana nezimo ezithile njengokuthi mhlawumbe omakhelwane bakho baqalile benza umsebenzi wokwakha okwenza kube nomsindo noma mhlambe kuzomele ukuba zikhuphuke ngezitebhisi ezingu-8 ukuze zifike endaweni yakho ezizohlala kuyo.
Yenza uhlu lwawo wonke amasevisi ohlinzeka ngawo futhi ube nesiqinisekiso sokuthi wonke ayatholakala futhi ayasebenza.
INANI LOBUSUKU NGABUNYE
Qinisekisa ukuthi isikhala sakho sihambisana nenani olibekile. Inani eliphakeme kakhulu lingase lenze ukuthi izivakashi zicabange ukuthi indlu yakho yinhle ngokwedlulele. Ingabe udinga usizo? Zama ukubheka ezinye izindlu endaweni yakho noma uvule Indlela Yokubeka Inani.
Inqubo ecacile nelula yokungena kwezivakashi kwakho emva kosuku lohambo olude ingasiza ukuthi izivakashi zakho zikhululeke. Izivakashi zizocelwa ukuba zihlinzeke ngamaphuzu mayelana nalokho ezihlangebezane nakho ngesikhathi sokungena kwakho emva kokuhlala endaweni yakho.
Yenza umhlahlandlela wokungena mayelana nendleu yakho–izoyihlinzeka isivakashi sakho ngaphambi kokungena kwaso emahoreni angu-24 ukuze sibe nakho konke esikudingayo ukuze sifike ngaphandle kokuphazamiseka
Uma uhlela ukuhlangana nezivakashi ubus nobuso, qiniseka ukuthi uhlela isikhathi sokungena kusenesikhathi
Uma usebenzisa uhlelo lokuzingenela kwezivakashi ngokwazo, hlinzeka ngemininingwane ngaphansi kwesihloko esithi Izinsiza zezivakashi esigabeni sendlu yakho
Qinisekisa ukuthi izivakashi zakho ziyakwazi ukuxhumana nawe uma kwenzeka zibambezeleka noma kukhona ezifisa ukukubuza kona ngokushesha
Ziyalele kahle nangokucacile izivakashi zakho indlela eza kwakho-ungonga isikhathi ngokuthi sakho ngokuthi ufake yonke imiyalelo yendlela eza kwakho kumanyuwali yekhaya lakho
Ukusekela izivakashi ngesikhathi zihleli endaweni yakho
noma ngabe uhlala nezivakashi zakho endaweni yakho noma awuhlali nazo, kodwa kumele uhlale utholakala ngaso sonke isikhathi besasendaweni yakho. Izivakashi zakho ziyoba nethuba lokuphawula mayelana nokuxhumana okucacile kanye nokuvumelana okube khona phakathi kwazo nawe ngesikhathi zihleli endaweni yakho - futhi lawa maphuzu anikezwa ababungazi azovezwa ekhasini lendlu yakho.
Lawula ukuxhumana kwakho nezivakashi ukuze izivakashi zazi ukuthi ukhona uyatholakala. Xhumana nezivakashi kusasenesikhathi ukuze ukwazi ukuhlela izinhlelo zokufika kwazo. Uma ungeke ukwazi ukubingelela izivakashi zakho lapho zifika, ungazithumela umlayezo ngesikhathi zingena ukuze uqinisekise ukuthi konke kuhamba kahle.
Uma uqinisekisa ukubhuka kanye nokuthile mayelana nezinguquko ezimaqondana nendleu yakho, tshela isivakashi sakho kusengaphambili.
Dawunloda i-app ye-Airbnb ukuze ukwazi ukuphendula imiyalezo noma ukuphi.
Uma ungahlali kuleyo ndawo ezizohlala kuyo, unganika izivakashi zakho imininingwane lapho ezingaxhumana nawe.